Jeneraal Odowaa oo kulan degdeg ah isugu yeeray teliyeyaasha kala duwan ee ciidamada -News and information about Somalia
Home Warkii Jeneraal Odowaa oo kulan degdeg ah isugu yeeray teliyeyaasha kala duwan ee...
Jeneraal Odowaa oo kulan degdeg ah isugu yeeray teliyeyaasha kala duwan ee ciidamada
Taliyaha Ciidamada Soomaaliya, Jeneraal Odowaa Yuusuf Raage, ayaa waxa uu kulan degdeg ah isugu yeeray taliyeyaasha kala duwan ee talisyadda Ciidamada Qalabka ee difaaca Qaranka.
Warar xog ogaal ah ayaa xaqiijinaya in kulamadaasi oo ka dhici doona Muqdisho looga arrin-sanayo sidii loo dardargelin lahaa howlgalada ka socda waddanka ee ka dhanka ah xoogaga Al-Shabaab.
Xogta ayaa intaasi ku dareysa in ay isla soo qaadi doonan isbedelo lagu sameynayo talisyadda guutooyinka kala duwan ee ciidanka xoogga, gaar ahaan kuwa ka howlgala gobolada Jubooyinka.
Qorshahan oo ay Madaxtooyadda gedaal ka riixeyso ayaa ujeedkiisu wuxuu yahay sidii loo fulin lahaa balanqaadkii madaxweyne Farmaajo intii uu olaha ku jiray, kaasi oo ah xorreynta degaanada ay Al-Shabaab haysato.
Farmaajo ayaa waxaa haatan u hartay hal sano iyo bilooyin, waxaana calaamad su’aal ay dul-saaran tahay sidda ay ku suurtogeli karto in AlShabaab laga saaro qeybaha haatan baaqiga ku ah gacanteeda.
Previous articleXOG: Somaliland oo xireysa Xildhibaan codsaday in uu ka qeybgalo caleema saarka Axmed Madoobe
Next articleDHAGEYSO: Wasiir holac kusii shiday qadiyad maqaar-xanuunjineysa xukuumadda Khayre
Duqeyn Diyaaradeed Oo Ka Dhacday Deegaan Ku Yaalla Jubbada Hoose
Wasiirka Qorsheynta Galmudug oo ka hor yimid xil ka qaadistii uu...